Berylazy Copper Alloy Wire
Al2O3 Ny fanaparitahana dia nanatanjaka ny tanam-bala alika
Coprot Ferro Alloy
Ny orinasa dia manamboatra fitaovana amin'ny haingam-pandeha avo lenta, asongadin-tsavony izay asongadin'ny hafanana avo, ny fifehezana avo, ny hery mahery vaika, ny fanoherana ny fanoherana ny havizanana sy ny fanoherana. Ireo fitaovana ireo dia ampiasaina betsaka amin'ny aerospace, fifandraisana, welding, petrochemical, pitsaboana ary sehatra hafa.
Ny halavan'ny CuCrZr dia azo ampiasaina amin'ny fantsom-pahamendrehana manohitra ny hafanana avo sy ny fantsom-pahamendrehana tsara amin'ny fantsom-pamokarana, ny fametahana motera fiara sy ny sisa.
Ao amin'ny indostrian'ny solika dia azo ampiasaina ao amin'ny vatofantsika hidradrano ihany koa ny allie CuNiSn, ny fampifangaroana ny tsenan'osin'ny mpijinja, ny fitrandrahana raha mando (LWD), mitondra ny roim-boary sy ny fanala.
Amin'ny indostrian'ny simika, ny alloy CuNiSn dia azo ampiasaina ihany koa amin'ny fihetsiketsika, fanentanana tsindry sy ny sisa.
Ny varahina beryllium avo dia azo ampiasaina amin'ny konektorana coaxial, probe, fifandraisana, military aerospace sy ny sisa.
Amin'ny maha-orinasa teknolojia avo lenta amin'ny sehatra nasionaly, i Kinkou (Suzhou) Copper Industry Co., Ltd dia niorina tamin'ny Mey 2004 ary hita tao Taicang, Suzhou, toerana manodidina an'i Shanghai. Ny orinasa dia manamboatra fitaovana amin'ny haingam-pandeha avo lenta, asongadin-tsavony izay asongadin'ny hafanana avo, ny fifehezana avo, ny hery mahery vaika, ny fanoherana ny fanoherana ny havizanana sy ny fanoherana. Ireo fitaovana ireo dia ampiasaina betsaka amin'ny aerospace, fifandraisana, welding, petrochemical, pitsaboana ary sehatra hafa.
Raha manontany momba ny vokatra na pricelist, azafady avelao izahay ary hifandray ao anatin'ny 24ora izahay.
Raisinay hatrany ny vahiny avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao amin'ny orinasanay mba hananganana fifandraisana miaraka aminay.
Ny orinasa dia manamboatra fitaovana amin'ny haingam-pandeha avo lenta, asongadin-tsavony izay asongadin'ny hafanana avo, ny fifehezana avo, ny hery mahery vaika, ny fanoherana ny fanoherana ny havizanana sy ny fanoherana.
KINKOU158 alloy varahina (Cu-Ni-Sn C72900)
Copper Nickel Cobalt Beryllium Alloy Rod Ary Wi ...
Fiakarana avo sy fanendahana maimaim-poana beryllium Coppe ...
Free -ery Beryllium Copper Rod and Wire (CuBe ...
Ny varahina Beryllium dia varahina varahina iray izay singa mampitambatra indrindra dia beryllium, antsoina koa hoe varahina beryllium. Ny varahina Beryllium no fitaovana ahavitana mandroso tsara indrindra amin'ny alika varahina, miaraka amina tanjaka avo, elastika, hamafisina, tanjaky ny havizanana, hysteresis elastika kely, fanoherana ahitra, hita indray ...
Mora vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy. Ny endri-javatra fototra amin'ny bobongolo varahina beryllium: 1. Ny fanaovana dika mitovy toy ny volon-biby, ny marika hodi-biby, ny kitay hazo, ny tarehim-biby, sns, dia mahatoky tanteraka ny tany am-boalohany ary afaka manamboatra sy manonitra ireo lesoka azo avy amin'ny ...
1. Omby dia omena amin'ny tsipika mahitsy ho tantanana na hamolavan'ny mpanjifa ho ampahany farany. Ny fananganana dia atao alohan'ny fanamafisana taona. Ny fanodinana mekanika dia matetika aorian'ny fanamafisana. Ny fampiasana mahazatra dia:
No.18 Xingye South Road, Faritra Fivoarana ara-toekarena Taicang, Sina
Singa elektronika sy elektronika